Kohen Rivolala Mila an-dRavalomanana ny firenena
Ntsay Christian ho Praiminisitra Tsy levon’ny vavonin’ny MAPAR sasany…
Ny sabotsy takariva dia nihaona manokana i Andry Rajoelina sy ny Praiminisitra Ntsay Christian, saingy tsy nisy nipika ny resaka. Mandeha ny fanangonan-tsonia amin’izao eny amin’ny antenimieram-pirenena amin’ny mbola hamerenana an’Atoa Ntsay Christian ho praiminisitra.
Rajoelina sy ny IEM Hisedra olana goavana ara-bola…
Tsy maniry ratsy ho an’ny fitondram-panjakana vaovao hotarihin’i Andry Rajoelina sy ny firenena fa sarotsarotra ny zavatra miandry ny mpitondra.
Fitadiavan-tseza sy fahefana Raikitra ny resa-poko sy fiaviana
Fomba fanao amin’ny fitadiavan-tseza sy fahefana ary toerana ao anaty fanjakana ny resa-poko sy fiaviana.
Fitantanana ny firenena Sarotra ny mitondra ny Malagasy
Goavana ny asa miandry ny filoham-pirenena vaovao. Fanamby sy velirano ao anatin’ny fandaharan’asa ny filoham-pirenena vaovao ny hanatsarana ny sosialim-bahoaka ao anatin’ny dimy taona.
Vinan’i Andry Rajoelina Tokony hifanaraka amin’ny filan’ny vahoaka, hoy ny ABA
Mitohivakana ny fanehoan-kevitra mikasika ny fahazoan’ny malagasy filoham-pirenena vaovao, Andry Rajoelina. Naneho ny heviny manoloana izany ny filohan’ny Antokom-Bahoaka malagasy (ABA), Dany Rakotoson.
Marc Ravalomanana Maro ny adidy mbola miandry azy
Niomana fatratra ny hitondra firenena i Marc Ravalomanana, ary nipetrapetraka ny programam-pampandrosoana, kanefa ireny no voka-pifidianana izay niteraka adihevitra saingy naneho fahendrena izy.
Arlette Ramaroson « Manana ny heviny Andriamanitra. »
Tsy matin’ny malagasy maro lolo hatramin’izao ny anton’ilay fianianana tsy misy vavaka sy baiboly etsy Mahamasina amin’ny sabotsy.
Antony tsy nahafahan’i Kohen Rivo Lala Ctic Ctac Do ho an’i Madagasikara na ny CCDM nilatsaka hofidiana ho filoham-pirenena ny tsy mbola nivoahan’ny taratasy “récépissé legal”an’ny antoko Politika CCDM izay tarihany, raha ny fanehoan-kevitr’i Kohen Rivolala.
Naneho ny fahavononany tanteraka izy ary poron’izany ny fandaniam-bola nataony satria efa ho 5 volana lasa izay nanao “pré-campagne”, ny fidirana tamin’ny haino aman-jery maro nilazany ny programan’asany sy ny vina hoentiny mitondra an’i Madagasikara,... Ny fotoam-bita tokoa anefa tsy mahaleo ny sampona fa tsy nahazo nilatsaka i Kohen Rivo Lala noho izy tsy mbola manana ny antoko Politika ara-dalàna, ka dia ny fanohanany ny filoha Marc Ravalomanana izay efa naharesy lahatra azy sy notohanany hatramin’izay no hitany fa vahaolana ara-politika sy sosialy ho an’i Madagasikara raha ny nambarany. Latsaka an-katerena tokoa ny firenena Malagasy ka mila mpitondra efa manana traikefa sy olon-dehibe sy zatra mitantana ary mitsinjo ny tantsaha, hoy izy. Mila mpitondra hentitra sy to teny handroso haingana. Tsy olona baranahana sy mpanao politika malemilemy hazon-damosina. Mila an’i Marc Ravalomanana ny Malagasy 25 tapitrisa, hoy i Kohen Rivolala ka manainga ny mpomba azy rehetra manerana an’i Madagasikara izy mba hiara-kifanolo-tanana hanao izay hahalany an’i Marc Ravalomanana laharana faha-25 amin’ny fifidianana fihodinana faha-2 io. Hanao izay faraheriko aho sy ny mpanara-dia ahy eran’ny Nosy sy hatrany ivelany hampandany an’i Marc Ravalomanana, hoy hatrany i Kohen Rivolala. Misokatra hatrany amin’ny rehetra na aiza na aiza misy azy i Marc Ravalomanana, ary kandidan’ny vahoaka Malagasy manontolo sy ho filohan’i Madagasikara. Afaka mampiombona rehetra, ka ireo kandida filoha nifaninana taminy tamin’ny fihodinana voalohany aza, dia maro no efa re na tsy nanao fanambarana ofisialy aza, fa vonona hanohana sy hanome tanana azy.